घर एशियाई-ओशियनियन फुटबल स्टोरीहरू ओसिनिया फुटबल खेलाडीहरू हारून Mooy बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB एक मिडफील्ड जीनियसको पूर्ण कहानी प्रस्तुत गर्दछ जो उपनाम द्वारा सबैभन्दा राम्रो हो; “चिल्लो टाउको”। हाम्रो हारून Mooy बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा उनीहरूको बारेमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र धेरै थोरै ज्ञात तथ्यहरू भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैलाई थाहा छ उनीको अन-पिच नेतृत्व क्षमताहरूको बारेमा तर केहि हाम्रो हारुन मूयोको बायो लाई ध्यान दिन्छन् जुन एकदम चाखलाग्दो छ। अब थप adieu बिना, सुरु गरौं।
आरोन मूई बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
हारून फ्रैंक Mooy सेप्टेम्बर, अष्ट्रेलियामा सेप्टेम्बरको 15th दिनको जन्म भएको थियो। जन्मेको, उनको नाम हारून कुर्मानमैन र हारून मुई नामकरण गरिएको थियो। तिनको डच आमाले आफ्नो उपन्यास परिवर्तन गर्नुभएपछि सानो मोची एक बच्चा थिए। वास्तवमा, माईले मात्र आफ्नो बुबालाई एक चोटि देखे - र त्यसपछि मात्र छोटो हुँदा उनी एक बच्चा हुनुहुन्थ्यो।
शर्मीली, गोरा-बालों वाली बच्चालाई फुटबलको साथ प्रेममा गिरियो र तिनका आमाबाबुले जुनूनलाई पोषण गरे। त्यसपछि, उनी टिभीमा अस्ट्रेलियन राति फुटबल (प्रिमियर लीग) हेर्न र उनीहरूको बारेमा पागल हुदै आदी थिइन्। Mooy बजारमा जानुभयो र मैनचेस्टर युनाइटेड प्रीमियर लीग जर्सी पाउनेछ। डेविड बेखम उनी आफ्नो मनपर्ने कुरा थिए, जब उनी टिभीमा थिए हारूनले हेर्नुपर्नेछ। बेकहमलाई हेरेपछि, उसले आफ्नो फ्रि-किकहरू अभ्यास गर्ने छ र आफू आफू हुँ जस्तो लाग्छ।
फुटबल आफ्नो बाल्यावस्थाको जीवनको एक ठूलो अंश बन्न थालेपछि आरोन फुटबलर बन्ने सोचलाई रोक्न सकेन। उनी सिथनी ओलम्पिक पार्कमा रहेको न्यू साउथ वेल्स इंस्टिट्यूट अफ स्पोर्ट (एनएसडब्ल्यूआईएस) मा भर्खरै आफ्नो युवा क्यारियर शुरू गर्न भर्ना भए।
Mooy ले धेरै फुटबलर्सहरूको लागि राम्रो तरिकाले पथ पछ्याउने बाटो पछ्याउँदै र उनीहरूको सपनाहरू पछ्याउन जवान युवतीमा आफ्नो जीवनको जगेडा गरे। उहाँले अष्ट्रेलिया छोडेर 15 उमेरमा सूर्य-ब्लाउलेट ताले र तल चित्रित रूपमा जलाउने इच्छाको साथ छोड्नुभयो।
उनले युरोपमा बोल्टन वान्डरर्समा युवा विद्वानको रूपमा क्यारिस शुरू गरे क्रिस सुल्लीले भेट्टाए पछि। हारून Mooy ले पहिलो पहिलो टोली फुटबलको खोजीमा जुलाई 2010 मा बोल्टनबाट एक सम्झौता विस्तार विस्तार गर्यो। उहाँ पछि सामेल हुनुभयो स्कटिश प्रीमियर लीग क्लब सेन्ट मिरेन २ October अक्टूबर २०१०। अचम्मको कुरा, पछि मोईले स्कटल्यान्डको लागि इ England्ल्यान्डको व्यापार २०१२ मा पश्चिमी सिडनी वान्डरर्सलाई ए-लीगमा सामेल हुन घर फर्किनु भन्दा पहिले।
2016 मा, उनले मैनचेस्टर सिटीको लागि खेल्न इंग्ल्यान्डमा फर्किए। त्यहाँ, हेडर्सफील्ड टाउनमा स्थायी कदमको लागि ऋणबाट जानुभयो। बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, अब इतिहास हो।
आरोन मूई बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
आरोन मूय २०११ मा स्कटिश टोली सेन्ट मिरेन एफसी आरोन र निकोलासँग आफ्नो जीवनको दौडान निकोला भेट्टाए बढ्यो सँगै प्रेम र सद्भाव। तिनीहरू तिनीहरूको सम्बन्ध अनन्त साहसको रूपमा विचार गर्छन्।
कुनै पनि नयाँ अभिभावक जस्तै, आरोन मूएको जीवन पल्टियो जब उसको पहिलो बच्चा जन्मियो। अस्ट्रेलियाको स्टारसँग धेरै गहिरा प्रतिबिम्बका क्षणहरूका लागि अधिक कारणहरू थिए। हामी तपाईंलाई किन ...
तिनका शब्दहरूमा… "अब जब मेरो बच्चा छ (स्काईलर) मैले बुझे कि म आफ्नो बच्चालाई कती माया गर्छु। यो पहिले नै हास्यास्पद छ। उसको लागि छैन मलाई मेरो पिता जस्तै जस्तो देख्न चाहन्छु। वास्तवमा, मैले बुझिनँ। म अहिले खुसी छु। यो विगतमा छ, म यो बारेमा अब सोच्न चाहँदैन। मैले लगातार लगातार फुटबलको बारेमा सोधेँ र यदि मेरो खराब खेल थियो म यसको बारेमा सोच्न चाहन्छु। अब म मेरो बच्चा छ र यसले मेरो दिमागबाट यो लिन्छ, '' हारून Mooy ले भन्यो।
पूर्व पश्चिमी सिडनी विन्डरर्स र मेलबोर्न सिटी स्टारले पहिलो पटक निकोलालाई 2011 मा भेट्नुभयो र गाँठो बाँड्न साहसी थियो। “उनी अन्ततः मेरी श्रीमती हुन्! कस्तो अचम्मको दिन, " उनले Instagram मा लेखे।
आरोन मूई बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
आफ्नो पारिवारिक उथलपुथलको बावजुद, मूए मायालु परिवारमा हुर्केकी थिइन, उनको साहसी आमाले हेरचाह गर्ने स्टेपडाडसँगै मेरुदण्ड प्रदान गर्‍यो, एरन टोड जसलाई हारुन धेरै माया गर्थे। आरोनका बुवा बुबा जर्मनीमा जन्मिएका थिए। एकपटक, हारूनले उनको बाबुलाई भेट्ने निर्णय गरे जब उनी डच पासपोर्ट प्राप्त गर्न बाँकी उनको पासममा स्तम्भमा हस्ताक्षर गर्न चाहन्थे।
हारूनले यसलाई राख्दछ। "मैले उनको डच पासपोर्टको लागि फारमहरू साइन गर्न एक पटक भेटें, त्यो एकमात्र समय थियो" Mooy भन्नुभयो…।"यो पहिले नै इंग्लिश पुग्यो, त्यसैले म 14 थियो। यो धेरै छोटो थियो। "
जब उनले आफ्नो भाइ भेट्टाए: एकपटक उनी केहि वेस्टर्न सिडनी विन्डर्सर्स केटाहरूसँग एक किनमेल केन्द्रमा थिए र यो बच्चा तिनको छेउमा आए र भने, 'नमस्ते म कुरमन हुँ, हाम्रो एउटै बुबा छ र मेरो मामीले तपाईंको बच्चाको फोटोहरु पाउनुभयो'। आरोन मूयले भने ..."म थकित थिएँ, शब्दहरूको लागि हरायो, साँच्चै असहज। मलाई थाहा थियो कि उहाँका बच्चाहरू हुनुहुन्थ्यो तर मलाई थाहा छैन कि कति वर्ष वा उमेर। मलाई सोच्दैन कि म उनीसँग कुरा गर्नेछु। एक बच्चाको रूपमा मैले उसलाई जान्न चाहँदैनथे, म सधैँ केहि निराश हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बिना कुनै सम्पर्क बिना यति लामो थियो। वास्तवमा, मेरो पहिलो सम्झनाहरू क्यारेडफोर्ड रिबेब्याकहरूको लागि फुटबल खेल्नका लागि फुटबल खेल्दैछन्। ''
आरोन मूई बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -टैटू तथ्याङ्कहरू
हारून Mooy ले आफ्नो व्यक्तित्व को निम्नलिखित विशेषता छ।
आरोन मूईको क्षमताहरू: उहाँ वफादारी हुनुहुन्छ (सम्बन्ध र करियर-बुद्धि), विश्लेषणात्मक, दयालु, कडा परिश्रम धेरै व्यावहारिक।
आरोन मूयको कमजोरीहरू: उहाँ धेरै चिन्ता गर्नुहुन्छ र बजाउने सबै दिन काम गर्न सक्नुहुन्छ।
हारून Mooy लाई मनपर्छ: आफ्नो बाल, जनावरहरू, स्वस्थ खाना, पुस्तकहरू, प्रकृति र स्वच्छता सिकाउँदा
हारून Mooy नमनपराउने: रुद्रता, मदतको लागि सोध्नु, केन्द्र चरण लिन।
सारांशमा, हारुन त्यस्तो व्यक्ति हो जसले सँधै साना विवरणहरूमा ध्यान दिनेछ र मानवताको गहिरो अनुभूतिले उसलाई जीवनका कारोबारमा धेरै सतर्क बनाउँदछ।
Mooy डच विरासत हो, र उनको बायाँ कंधे मा, उहाँसँग शब्दहरू छन् "Leven, Lachen, Liefde" टट्याट, जसले अनुवाद गर्छ "बाँच, हाँस र माया गर"। उनको आमा, सैम आफ्नो कलाई मा एउटै शब्दहरू छन्।
आरोन मूई बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -उहाँही हाई स्कूलमा हैरी किभेलको रूपमा जानुभयो
वेस्टफील्ड स्पोर्ट्स उच्च, फेयरफील्ड फुटबल फैक्टरीको रूपमा पनि जानिन्छ, अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा प्रतिभाशाली खेल ताराहरू उत्पादन गर्न प्रतिष्ठा छ। केभेल हाई स्कूलको स्नातक थियो र यसैले Mooy थियो।
आरोन मूई बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -उहाँको आदरको गीत
मूईको चिल्लो टाउको हर्डर्सफील्ड टाउन चेन्टको शीर्षक हो। बोनी एमको १ 1978 XNUMX को हिटको आवाजमा गाईयो यो यस्तो देखिन्छ।। "हुर्रे! हुर्रे! यो होली-हलिडे हो! ”, गीत जान्छ, "हारून Mooy, हारून Mooy। हारून, हारून Mooy। उहाँ कुनै कपाल छैन, तर हामी परवाह गर्दैनौं। हारून, हारून Mooy। "
आरोन मूई बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य -H1972 पछि पहिलो पटक एपीएलमा एलपीड हडडफील्ड टाउन
हडर्सफिल्ड टाउनले यस सत्रमा प्रिमियर लिगमा पदोन्नति कमाउन चाहँदैनन्, तर मोईले आफ्नो जादूलाई मिडफिल्डमा बुनाई, क्लबले पहिलोपटक एक्सन्युमएक्समा पहिलो पटक फर्के। बाटोमा, Mooy ले 45-2016 सिजनको अन्तिम खेलमा पढ्नको लागि एक निर्णायक दण्ड सहित चार गोल गर्यो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो हारून Mooy बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाईं केहि देख्नुहुन्छ जुन यो लेखमा ठीक देखिँदैन भने, कृपया तपाईंको टिप्पणी वा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!।
हडर्सफील्ड टाउन फुटबल डायरी